Machadka McKnight wuxuu doonayaa in uu noqdo shaqo-bixiye shaqaale kala duwan oo loo dhan yahay. Si aad u fahamto naqshadaha nalalka codsigeena codsigeena waxaan kaa codsanaynaa inaad iskaa-wax-u-qabso buuxda foomka hoose.
Codsadayaasha loo shaqaaleysiinayo waxaa lagu martiqaaday in ay wadaagaan macluumaadka dadweynaha. Iyada oo la ballaarinayo martiqaadkan sidoo kale waxaa lagula talinayaa in: (a) lagugu qasbo inaad ka jawaabto, laakiin mustaqbalka waa inaad sameysaa haddaad doorato; (b) jawaabaha shakhsiyeed waxay ku sii jiri doonaan Waaxda Shaqaalaha; iyo (c) jawaabaha waxaa loo isticmaali doonaa in la fahmo oo la wadaago xogta guud ee dadweynaha iyo qiimeeynta dadaalada ku aaddan goob shaqo oo kala duwan oo loo dhan yahay.
Maareeyaha Barnaamijka Bulsho ee Feejigan & Sinnaanta
Miyaad ka timid asaliga, Latino, ama asal ahaan Isbaanish?
Sidee ayaad isu aqoonsan lahayd? (Calaamadee dhammaan kuwa khuseeya)
Hindida Mareykanka ama Dhaladka Alaaska
Native Hawaiian ama jasiiradaha kale ee Baasifiga
Si aad u aqoonsato jinsigaaga ugu badan?
Kala duwanaanta Jinsiga / Lama-mideynin
Xaaladda Degdegga ah?
Special Veteran Disabled Veteran
Hawlgallada Ciidul Fidiga Ciidanka Hawlgabka
Tilmaamaha galmoodka ugu badan ee aad ku tilmaamto?
Gay / Lesbiyaan
Su'aalo ama hubin
Adigu ma aqoonsan tahay inaad tahay qof naafo ah ama si ka duwan sidii hore?